version 0.7.6 – လှိမ့်ပေါ် Keep
သြဂုတ်လ 3, 2011 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 43 comments
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ် wordpress plugin လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူသင်တို့ရှိသမျှကိုတင်ဆက်ဖို့ပျော်ရွှင်ကြတယ်. ဒါဟာမဆိုအဓိကအပြောင်းအလဲသို့မဟုတ်လွန်း groundbreaking ကြောင်းအရာတစ်ခုခုများမပါဝင်ပါဘူးတဲ့မွန်းလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရုံ ChangeLog အပေါ်မှာသွားနဲ့သတင်းကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်.
ကျနော်တို့ကအသစ်ရေဆန်လွှတ်ပေးရန်မှကျွန်ုပ်တို့၏ parser ကိုမှခြေရင်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သောရိုးရှင်းသော html dom တချို့တိုးတက်မှုတွေတင်သွင်း, ဤအရပ်၌မရှိလောက်သတင်း
ရိုးရှင်းတဲ့ကို select လုပ်ပါ box ကိုအတူပို့စ် / စာမျက်နှာဘာသာစကား၏ setting ကို Allow. ဒါက feature အသစ်မဟုတ်ပါဘူး, ဤအတိတ်ကိုင်တွယ်ခဲ့နိုင်သကဲ့သို့ငါ့ကို manually ရေးသားချက်များမှ tp_language meta ထည့်သွင်း, သို့သော်သူကထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရိုးရှင်းပေ, ဒါကြောင့်လည်း feature ကိုအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်က translate ကို default language ပေါ်တွင်မှောက်သေချာအောင်.
ကျနော်တို့ဖြေရှင်းနိုင်မနိုင်သောသူအချို့အခြေအနေများနှင့်အသုံးပြုသူတစ်ဦးအကြောင်းသတိပေးဖို့ဖြစ်နိုင်၏အထူးသတိထားသင့်ပါသည်. လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့တွင်အကြောင်းသတိပေးအကြောင်းကြားနှစ်ခုအခြေအနေရှိပါတယ်, ရက်စွဲကျွန်တော်တို့၏ထောက်ခံမှုမေးခွန်းတွေကိုအများဆုံးဖန်ဆင်းတော်မူသောသူများကိုအရာများမှာ. ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့နိမ့်ကျချက်မှတ်ထားမှုအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်. သတိပေးလျက်, ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့? php ချက်မှတ်ထားမှုန့်သတ်ချက်တိုးမြှင့်ဖို့လူတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ (တစ်ခုသို့မဟုတ်လျောက်ပတ်သော hosting အတွက် service ကိုအကူးအပြောင်း). ဒုတိယသတိပေးချက်ကိုသိသိသာသာစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်နိုင်သည့် APC မရှိခြင်းသို့မဟုတ်အလားတူအကြောင်း (နောက်တဖန်အ, ပိုကောင်း hosting အတွက်မှ switch က!). အဆိုပါသတိပေးချက်ဘေးကင်းလုံခြုံစွာသင်မကြာမီကာလအတွင်းသူများသတိပေးချက်များကိုကြည့်ရှုမည်မဟုတ်ကြောင်းအာမခံတံ့သောအသေး X ကိုအမှတ်သင်္ကေတနှင့်ဘေးထွက်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားနိုင်.
အသုံးပြုသူခွင့်ပြုချက်အပေါ်သို့အမည်ဝှက် statisics ၏စုဆောင်း Allow. ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့သောဒေတာစုဆောင်းရန်ခွင့်ပြုကျေးဇူးပြုပြီးကျေးဇူးပြုပြီး! ကျနော်တို့အပေါ်အပြေးကြသည်တူကျမတို့တကယ်အချို့တို့သည်အနတ္တသက်သက်ဖြစ်ကြ၏စာရင်းဇယားချင်တယ် 1 zillion ဆိုက်များနှင့်စက္ကန့်လျှင်တစ်ဦး gazillion စာမျက်နှာများကိုဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်!
အသုံးပြုသူများ၏အစီရင်ခံတင်ပြ Fixed တချို့အသေးအဖွဲသတိပေးချက်ကိုအသိပေးနှိုးဆော်ချက်. နောက်တဖန်မသင့်ရာ Logs ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်ငြာများကိုဖယ်ရှားခြင်းပြီးတဲ့နောက်ပိတ်ဆို့နေတဲ့အတွက်အသက်ကိုလိမ့်မည်!
ကျနော်တို့ကိုလည်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောပါပြီ အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ စာမျက်နှာ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အချို့သော repeater မေးခွန်းများကိုရှောင်ရှားလိမ့်မည်, သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့များအတွက်အကူအညီဖတ်အသုံးပြုသူများအားပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်…
လည်း – ထိုသို့ဘက်မှာလူမှုရေးခလုတ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤစီမံကိန်းများ၏သင်၏ထာဝရထောက်ခံမှုပြသတဲ့အနေနဲ့ယခုယခင်ကထက် ပို. လွယ်ကူသည်, ဒါကြောင့်သင်သည်တစုံတခုကိုမျှကုန်ကျပါဘူး (ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်၏အဆွေခင်ပွန်းအပေါင်းတို့ဆုံးရှုံးသွားမှတပါး, facebook ပေါ်တွင်နာမည်ကျော်ကြားမှုနဲ့ဘုန်းအသရေ) ဒါကြောင့်လုပ်သာလုပ်ပါ!
ငါတို့သည်သင်တို့အဒီဗားရှင်းကိုခံစားပျော်မွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်, နှင့်လို (အမြဲတူ) သင့်ရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုဖတ်ရှုဖို့ပျော်ရွှင်စေ.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: 0.7, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး